Top 10 Best Disc-ere Ọkụ Software maka Windows
Flash draịva, ojii nchekwa na mpụga ike draịva nwere kpọrọ emetụta na ojiji nke DVD na CD na a nkịtị gburugburu ebe obibi. Ndị mmadụ na-ahu nagide flash draịva nyefee data site na otu PC ọzọ ma ọ bụ napụta a ọrụ a ọzọ site na email na enyemaka nke ojii nchekwa. Ọbụna mgbe a nnukwu igbu, diski ọkụ nwere enweghị ọgwụgwụ n'ihi na ọ na-enye anụ ahụ ndabere gị data na e nwere ndị na-erughị Ohere nke ọ na-aga ọjọọ tụnyere flash draịva na mpụga ike draịva. Taa, anyị ga-ele anya na ihe kasị mma diski ọkụ softwares dị.
Nkebi nke 1: Top 10 Best Disc-ere Ọkụ Software
Part 2: More Option nke onye Advanced & Professional Disc-ere Ọkụ Software
Part 1: Top 10 Best Disc-ere Ọkụ Software
123 Copy DVD Gold a na-ewere ndị kasị mma diski ọkụ software dị ugbu a. Ọ na-enye ọtụtụ nke ọrụ na mma nke ọkụ discs. Nke a ngwa anya diski toolbox-enyere gị aka iṅomi, ike ma na-eso video, ọdịyo na data on a nso nke discs. Ọrụ adịghị mkpa ọkachamara ihe ọmụma na diski ọkụ softwares iji na-eji 123 Copy isure ha data on discs. The ngwa ngwa igba egbe menu enye gị mfe ohere ka ngwá ọrụ na ọ na-ewe nanị ole na ole clicks na-esi gị data diski njikere.
Mụta ihe banyere 123 Copy DVD Gold >>
2. Roxio Onye Okike
Roxio Onye Okike abụghị nanị a diski ọkụ software kama ọ bụ ihe nile-na-otu media Suite na atụmatụ eke, edezi na-ebipụta audio, video na ihe oyiyi. E wezụga ya okike ụlọ, ọrụ nwekwara ike ọkụ audio, video na data discs. Roxio Onye Okike nwekwara ike tọghata ketara audio dị ka Vinyl Records na cassette etere na dijitalụ formats otú i nwere ike ịzọpụta gị collection na PC gị. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị mma ọgaranya diski ọkụ software dị.
Mụta ihe banyere Roxio Onye Okike >>
Dị ka aha-atụ aro, DVD MovieFactory Pro bụ a diski ọkụ software kachasị maka video na ọdịyo faịlụ. Ọrụ nwere ike ịmepụta, rip, idetuo na ọkụ discs. The software nwekwara ike tọghata ọdịyo faịlụ na dị iche iche formats ma na-akwado ụfọdụ Blu-ray ike dị ka nke ọma. The interface bụ nnọọ mfe iji na ikike ọkụ discs mfe bụkwa nwekwuru ihe uru.
Mụta ihe banyere DVD MovieFactory Pro >>
4. Nero-ere Ọkụ ROM
Nero-ere Ọkụ ROM bụ otu n'ime ihe ndị kasị ọtụtụ ebe ada diski ọkụ softwares na ụwa. Ọ pụrụ ịbụ n'ihi na eziokwu na ọ na-abịa tupu arụnyere na kasị OEM laptọọpụ na desktop kamakwa n'ihi na ọ bụ onye nke kasị mma na ripping na-ere ọkụ discs. Ọ na-enye oké a ndibiat nke akara ka onye ọrụ mgbe ọkụ DVD. Advanced ọrụ nwere ike tweak ntọala niile ka ha chọrọ results. Nero-ere Ọkụ ROM bụ pụrụ ịdabere na ala na otu nke kacha mma mma na-arụpụta diski na-enwu.
Mụta ihe banyere Nero-ere Ọkụ ROM >>
Cyberlink na-eme ka a nso nke softwares gụnyere webcam, media oke ime ụlọ na diski na-enwu. Power2Go bụ ihe dị mfe iji ngwá ọrụ nke dị na ọtụtụ OEM laptọọpụ dị ka ndabere. The mfe interface na mfe usoro-eme ka ọ kasị mma software maka beginners. Ọ nwekwara ike efego ISO oyiyi otú ị na-adịghị mkpa ọkụ diski bụrụ na ị chọrọ ịnweta data nwa oge. Ọ na-akwado ndị niile na iche iche nke discs gụnyere Blu-ray. Ọrụ nwere ike ịmepụta audio, video na data faịlụ site na iji Power2Go.
Mụta ihe banyere Cyberlink Power2Go >>
6. Express Ọkụ
Express Ọkụ bụ kemfe diski ọkụ software na ihe oké ọnụ price. The software nwere ikike ike data, ọdịyo na video discs on DVD nakwa dị ka Blu-ray. Blu-ray arụmọrụ na-ejedebeghị data discs naanị ma Express Burns nwere ike tọghata ọdịyo faịlụ na dị iche iche formats. Ọ dị mfe iji na a pụrụ ịdabere ma ọ bụrụ na ị chọrọ ọ bụla oru nkwado mgbe ahụ ị ga-azụ ihe ọzọ nkwado atụmatụ nke bụ nnukwu drawback nke software.
7. Mmanya 120%
Mmanya 120% na-akacha mara maka arịọnụ MD5 faịlụ iji nweta data ma ọ bụ a diski ọkụ software dị ka mma. Na okwu nke diski ọkụ, Mmanya 120% adịghị enye ọtụtụ nke ọrụ na ọ bụ a bit mgbagwoju anya iji n'ihi na ihe nkezi ọrụ. Ọ dị ukwuu n'ihi na Iṅomi discs ma ọ bụghị otú ukwuu n'ihi na-eke ọhụrụ discs site ọkọ. Ọrụ ga inwe mgbagwoju anya site siri ike interface karịsịa mgbe ha chọrọ ka ọkụ ma ọ bụ detuo ihe audio diski.
Mụta ihe banyere Mmanya 120% >>
Slysoft CloneCD nwere mma aghụghọ mgbe ọ na-abịa diski ọkụ softwares ma arụmọrụ nwere mmachi adịghị eme ka o siri ike osompi. Ọ na-enye gị ohere iji idetuo ọdịyo na data discs na ọ bụ ya. Ọ bụla arụmọrụ na-egosipụta na Ihuenyo nke na-eme ịnweta ọ bụla na-arụ ọrụ a ikuku. Enweghi nke ndị ọzọ na atụmatụ nwere ike ọ gaghị na-adọta a otutu ọrụ ma ọ bụrụ na ị dị nnọọ chọrọ iṅomi ọdịyo na data discs mgbe ahụ Slysoft CloneCD bụ maka gị.
Mụta ihe banyere Slysoft CloneCD >>
Blindwrite bụ ndị kasị oké ọnụ diski ọkụ software na ndepụta na ezi ihe mere ka nke ọma. All ọ na-enye bụ otu, ịgụ na ide discs. E nweghị ọzọ atụmatụ dị ka audio ripping, converting ọdịyo ma ọ bụ Blu-ray nkwado. The software dị mfe wụnye na-eji ma otu ugboro ọzọ arụmọrụ nwere mmachi bụ isi drawback. Detuo usoro naanị ihe ole na ole clicks na ọ bụ a na ncherita-iru usoro otú ị ga-enwe nsogbu ọ bụla na-eji Blindwrite.
Mụta ihe banyere Blindwrite >>
10. Pyro Audio Onye Okike
Pyro Audio Onye Okike na kachasị audio diski na-enwu. Ọ na-ekewa na anọ n'akụkụ nke na-agụnye - Encoder, Ripper, Tagger na burner. Ọ bụ ezie na ọ na-eme nile aga-eme nnọọ nke ọma ma na-emenye ụjọ imewe bụ isi drawback. Onye ọrụ interface bụ nnọọ ọjọọ na kpam kpam yipụ ala dị ka ọ bụrụ na e mere site na a gụchara ọhụrụ na-amụrụ. Ọ na-enye niile atụmatụ mkpa na a diski ọkụ software ma jogburu onwe imewe tụlee ya ala na-ala nke na ndepụta.
Mụta ihe banyere Pyro Audio Onye Okike >>
Part 2: More Option nke onye Advanced & Professional Disc Burning Software
Na-atụ aro 2: Wondershare DVD Creator
Ọ bụrụ na ị na-achọ a ngwá ọrụ nwere ike ime ka gị na pesonel video discs ọzọ ndị ọkachamara na Hollywood ịke, mgbe ahụ, m nwere ike ikwu na ị na Wondershare DVD Creator. Ọ nwere pụrụ iche uru n'elu niile Disc ọkụ ngwaọrụ n'elu. Na wuru na-ebube ndebiri maka gị DVD NchNhr, i nwere ike ike a pụtara Disc karịa mgbe. The ọkụ usoro bụ ọtụtụ ihe ngwa ngwa dị ka ị ga-atụ anya na tupu ị na-achọpụta na ọ na-ọkọnọ ziri ezi n'ihu gị.
Nkwado na-ere ọkụ vidiyo na ọ fọrọ nke nta ọ bụla na-ewu ewu video dị ka AVI, MP4, MKV, MPEG, MOV, FLV, wdg
Ọkụ videos ka a ọkachamara DVD Disc na 40 + professionally e menu ndebiri.
Hazie videos na menu ndebiri dị ka ọchịchọ gị tupu na-ere ọkụ Disc.
Eme ka i nwee ike na-akpa ọchị foto ngosi mmịfe ịkọrọ enyi na ndị ikwu.
Olee otú Ọkụ Video ka DVD Disc na Wondershare DVD Creator maka Windows (Windows 10 gụnyere)
Mgbe nbudata na na na wụnye a Wondershare Disc ọkụ software, dị nnọọ ịdọrọ na dobe faịlụ gị na ngwa, ma ọ bụ pịa "Import" na interface.
Ọkụ Video ka DVD Disc
> Resource> DVD> Top 10 Disc-ere Ọkụ Software maka Windows